Miyay tahay inaan ku bixiyo ceymiska shaqo joojinta ee shaqaalaha qandaraasyada muddada-go'an oo xiriirkooda qandaraaska uu sii socdo ka dib saxiixa heshiis joogto ah? Kawaran haddii ay tahay maxkamadda wershedaha ee amartay in dib loogu qoondeeyo CDD-ga CDI?
CDD: Lacagta halista ah
Qofka shaqaalaha ah ee qandaraaska muddada-go'an ah (CDD) waxtarrada, marka qandaraasku dhammaado, laga bilaabo dammaanadda qandaraaska dhammaadka, oo badanaa loo yaqaan "dammaanad-qaadista halista ah". Waxaa loogu talagalay in lagu magdhabo khatarta jirta (Xaaladda Shaqada, farshaxanka L. 1243-8).
Tani waxay u dhigantaa 10% wadarta guud ee mushaharka la bixiyay inta qandaraasku socday. Boqolkiiba waxaa lagu xadidi karaa 6% iyadoo la adeegsanayo heshiis qandaraas celin ah, gaar ahaan, helitaanka mudnaanta tababarka xirfadeed. Waxaa la bixiyaa dhamaadka qandaraaska, isla waqtigaas oo ah mushaharkii ugu dambeeyay.
Sida ku cad qodobka L. 1243-8 ee Xeerka Shaqada, magdhaw la'aanta halista ah, ee magdhow siisa, qofka shaqaalaha ah, xaalada uu ku sugan yahay qandaraaskiisa mudada go'an darteed, ma ahan markii xiriirka qandaraaska uu ku sii socdo qandaraas muddo aan la cayimin.
Sidaa darteed, haddii qandaraaska muddada-go'an isla markiiba ku sii socdo
CDD oo ku sii socota CDI: ma la siiyaa gunnada khatarta ah? July 8th, 2021Tranquillus
READ Maamul waqtigaaga (sanadka 2021) si aad u keydiso!
horeGunnada waayeelka: waa heshiiska wadajirka ah ee tilmaamaya in loo adeegsanayo xisaabinta ugu yar ee lagu heshiiyey
socdaKu bixinta saacadaha dheeriga ah ee lacagta caymiska waa fikrad xun